सम्झना : प्रेममा नपरेका ‘रोमान्टिक’ प्रेमध्वज – SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ कला / मनोरञ्जन ∕ सम्झना : प्रेममा नपरेका ‘रोमान्टिक’ प्रेमध्वज
Sindhu Khabar वैशाख २४, २०७८ गते १०:०० मा प्रकाशित
विडम्बना नै भन्नुपर्छ उनलाई जवानीमा पनि आफ्नो नामले साथ दिएन । व्यक्तिको नाममा व्यवहार हुँदैन भन्ने उक्तिलाई उनको भोगाईले चरितार्थ गरेको छ । प्रख्यात ‘सेलिब्रेटी’ भएर पनि कुनै युवतीको आँखा उनीमाथि परेन । त्यसबेलाका समकक्षीहरुको तुलनामा धेरै बढी प्रेमका गीत गाएका ‘रोमान्टिक’ गायक प्रेमध्वज प्रधान बैंशालु जीवनमा कहिल्यै प्रेममा परेनन् ।
सानैदेखिको लजालु स्वभावका सिन्धुपुत्र प्रधान प्रेमको विषयमा त्यति खुल्दैनन् । समकक्षी नारायण गोपाल, बच्चु कैलाश, योगेश बैद्यहरुको तुलनामा उनले धेरै रोमान्टिक गीत गाए । तर, उनी प्रेममा परेको भने स्वीकार्दैनन् । गीत सुनेर फोन गरी धन्यवाद दिने ‘फ्यान’हरु भने थिए उनका । ‘म लजालु स्वभावको भएकैले होला गीतबाहेक उनीहरुसँग अरु कुरा हुँदैनथ्यो ।’ उनी भन्छन् । लजालु स्वभावकै कारण उनी सबैसँग नजिक हुँदैनथें । जीवनमा कहिल्यै प्रेममा नपरेका उनको ३३ वर्षको उमेरमा डिल्लीबजारकी किरणकुमारीसँग मागी विवाह भयो । ‘विवाह गरेपछि श्रीमतीको प्रेममा परें,’ उनले सुनाए ।
बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन….
उनले गाएको यो गीतकै कारण हो या अरु नै । उनको जीवनको घुम्तीमा ‘प्रेम’ बोकेर कोही नआएको । उमेरले झण्डै आठ दसकको यात्रामा पुग्न लागेका गायक प्रेमध्वज प्रधानले यही गीतमार्फत सबैलार्इै आफूतिर आकर्षित हुन र प्रेम समर्पणका लागि नआउन अनुरोध गरेझैं भयो । भन्छन् सम्झँन्छन्–‘त्यो बेला अहिलेको जसरी पिरती गाँस्ने केटीहरु नै हुँदैनथे ।’ केटी पाउन मुस्किल हुने र पाइहाले पनि पिरती गाँस्न अहिलेको जस्तो सहज नहुने उनले स्मरण गराए । हुन पनि अहिले ‘डिजिटल’ युगले प्रेमलाई विस्तृत बनाएको छ । ऊ बेला र अहिलेमा फरक देख्छन् उनी । उनको भनाईमा समय बदलियो र बिस्तारै समाज आधुनिकतातिर उन्मुख भयो । ‘आधुनिकताले नै प्रेम विस्तृत बनाएको छ ।’ उनी भन्छन् ।
माता प्राणदेवी प्रधान र पिता रत्नध्वजको कोखबाट सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जन्मिएका गणेशध्वज नै नेपाली साँगीतिक फाँटमा प्रेमध्वज बनेर फैलिएको हो । चौतारास्थित तत्कालीन श्री कृष्ण प्राविमा कखरा सिकेका उनी उमेरले आठ नकट्दै काठमाण्डौं पुगेर विष्णु निकेतनमा पढ्न थाले । उनको सम्झनामा त्यहि विष्णु निकेतनले उनको नाम प्रेमध्वज जुराइदिएको हो । नेपाली संगीतमा यसरी जम्नुको श्रेय उनी आफ्नी आमालाई दिन्छन् । घरपरिवारमै गीतको माहोल भएकाले उनी पनि यो क्षेत्रमा लागेको आफै स्वीकार्छन् । उनका बाजे शास्त्रीय संगीतका शौखिन थिए भने आमाले २००७ सालमै रेडियो नेपालमा गीत गाइसकेकी थिइन् । संगीतबारे धेरै कुरा आमाले नै सिकाएकी र उनकै प्रेरणाले नेपाली सांगीतिक फाँटमा क्रमशः उँभोतिर लागेको उनी बताउँछन् ।
२०१४ सालमा गायिका तारादेवीसँग भूपी शेरचनको शब्द र नातिकाजीको संगीत रहेको ‘यो नेपाली शिर उचाली…’ जस्तो लोकप्रिय राष्ट्रियता झल्केको गीत रेकर्ड गराएर नेपाली साँगीतिक आकासमा आएका प्रधान लहडैमा संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताउँछन् । २००९ सालमा रेडियो नेपालमा स्वरपरीक्षा हेर्न गएका उनले त्यही बेला लहडैमा परीक्षा दिए र क श्रेणीमै उत्तीर्ण गरे । ‘मैले स्वरपरीक्षा दिने ठाउँमा हेर्न जाँदा एक युवती गीत गाइरहेकी रहिछिन्,’ उनी सम्झँन्छन्, ‘उनले गाएको गीत सुनेर मलाई पनि स्वरपरीक्षा दिने इच्छा आएपछि परीक्षा दिएँ ।’ त्यसबेला नेपाली गीत त्यति थिएन । उनले हिन्दी गीत गाएर स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए ।
स्वरपरीक्षामा पास भएपछि उनमा संगीतप्रति उत्साह बढ्यो । त्यसपछि २०१० सालमा उनी गणेशलाल श्रेष्ठकहाँ संगीत सिक्न गए । श्रेष्ठले ५६ किसिमको बाजा बजाउँथे । संगीत जीवनमा फड्को मार्नुमा आमापछि उस्ताज श्रेष्ठलाई श्रेय जाने उनी बताउँछन् । स्वर परीक्षामा पास भएवापत १० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएको उनको मानसपटलमा अझै ताजै छ । त्यसबेला ख श्रेणीमा पास हुनेले आठ रुपैयाँ र ग श्रेणीमा पास हुनेले पाँच रुपैयाँ गायकले पाउने गर्थे । ‘त्यो बेलाको दस रुपैयाँ धेरै थियो, खर्च गर्ने ठाउँ नै हुँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बुबा र आमा अलग अलग भएकाले मैले आफूलाई एक रुपैयाँ राखेर नौ रुपैयाँ आमालाई दिएकोथें ।’ उनले खर्च गर्ने ठाउँ नभएकाले एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको रमाईलो तथ्य सुनाए ।
राष्ट्रिय, लोक, आधुनिक र मातृ भाषामा गरी ६ सय ५० भन्दमा बढी गीत गाइसकेका प्रधान विदेशी कलाकारसँग युगल गीत गाउने पहिलो नेपाली गायक हुन् । उनले भारतीय कलाकारसँग नमान लाज बोलको गीत गाएको उनले बताए । संगीत सानैदेखिको रुचिको विषय भएको र पारिवारिक वातावराण पनि संगीतमय भएकाले उनले दिनप्रतिदिन कलाकारितामा लगाव राख्दै गए । तन, मन, वचन र कर्मले संगीतमा समर्पित उनले २०२१ सालमा कलकत्तामा कालजयी गीत गोरेटो त्यो गाउँको…. रेकर्ड गराए । एकैपटक २२ वटा गीत रेकर्ड गराएका उनलाई गोरेटो त्यो गाउँको बोलको गीतले शिखरमा पुर्यायो । गीत गाउने क्रममा उनले भारतीय कलाकार उषा मंगेस्करसँग पनि युगल गीत गाएका छन् । सन् १९६५मा उनले उषासँग गीत गाएको सुनाए । उषा भारतीय चर्चित गायिका लता मंगेस्करकी बहिनी हुन् ।
देश र विदेशमा गरी थुप्रै स्टेज शो गरिसकेका प्रधानलाई यत्ति वटा कार्यक्रममा गएँ भन्ने सम्झना नै छैन । ‘धेरै ठाउँमा गएर गाईयो, गन्नै सक्दिन ।’ उनले भने । ‘लाईभ’ कार्यक्रममै सिलसिलामा उनले भारतको मुम्बईमा गरेको कार्यक्रम भने अझै दिमागमा छ । त्यसबेला उनले ५ हजार दर्शकसामू चर्चित घुम्तीमा नआऊ है…. बोलको गीत गाउँदा ‘वान्स मोर’ आएको थियो । त्यो पल उनी सँधै सम्झनामा आउने क्षण रहेको बताउँछन् ।
डा. गौरी प्रधानको शब्द रहेको सिन्धुपाल्चोकको सौन्दर्य झल्कने गीत सिन्धुको शीर जुगलको काख… गाएका उनले पछिल्लोपटक दसैं अगाडि गीत रेकर्ड गराएका थिए । गीत संगीतमै समर्पित उनले चलचित्रमा पनि धेरै गीत गाएको बताउँछन् । चलचित्र जीवनसंघर्षका सबै गीत उनले गाएका हुन् । सो चलचित्रमा समावेश पाँचवटै गीतमा उनको स्वर छ । नेपाली चलचित्र जगतमा एकै फिल्ममा एकै जनाले गाएको यो नै पहिलो हो ।
सुरुमै राष्ट्रियताको गीत गाएका उनी अहिलेका युवा पुस्तामा राष्ट्रप्रेम पहिलाको तुलनामा कमी भएको तर्क राख्छन् । गीतबाटै समाज विकासमा होमिएका उनले धेरै सम्मान र पुस्कारहरु पाइसकेका छन् । हालसम्म उनले २०४६ मा छिन्नलता पुरस्कार, २०४४ मा गोरखा दक्षिणबाहु चौंथो, २०५१ मा त्रिशक्ती पदक, २०६६ मा एक लाख राशीको राष्टिय प्रतिभा पुरस्कार पाइसकेका छन् । उनलाई जिल्लाबाट दुःखी प्रकाशनले २०५१ सालमा अभिनन्दन गरेको थियो । यो अभिनन्दन उनको जीवनकै पहिलो हो ।
हिजो देहावसान भएका बरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानसँग ७ वर्षअघि चौतारामा गरिएको कुराकानीमा आधारित । यो सामग्री १९ फ्रेब्रुअरी २०१४ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । अहिले यो जस्ताको तस्तै साभार गरिएको छ ।